Mumhanzi | Shanyira Hultsfred
Tarisa zvese zvekudyira zvekudya & pizzerias
Mumhanzi haumire pano!
Mutambo wemimhanzi weSweden wakakurumbira wakaberekerwa pano. Asi mumhanzi manisiparati Hultsfred akanyanya kupfuura izvozvo. Pamusoro pezviitiko zvemimhanzi uye mitambo, kune zviratidziro, ChiSwedish Dombo dura uye nhandare yemimhanzi. Iwe unoda here kudzokorora Hultsfred Mutambo? I yedu yekudyidzana kufamba Hultsfred - iyo Kufamba iwe unogona kutonzwa pasi pa Hawaiichiitiko ichigwinha zvakare. Welcome to nyika mimhanzi!
Hultsfred - Kufamba
Zvinopfuura hafu yemiriyoni zvinhu zvine chekuita neSweden mimhanzi inozivikanwa. Pano iwe unowana zvakarekodhwa, maposta, vhidhiyo rekodhi, mabhuku, zvido - uye Kurt Olsson yepakutanga koshitomu! ChiSwedish
Paki iri muHultsfred iri mumweya wemimhanzi, uko vadzidzi vanobva kuLindblomskolan vakadhirowa mifananidzo semazano ezvavaida kuti zvioneke. Pedyo nepaki pane ma boules matare uye akanaka magreen nzvimbo.
Imba Yakanaka Hultsfred
"Kumba Kunotapira Hultsfred" chiratidziro chinotaurira nyaya yesangano Rockparty uye Hultsfred Mutambo. Nyaya iri mumadziro! Chiratidziro cheRockparty uye iyo Hultsfred Mutambo inogona kuwanikwa mukamuri yeKlubben mukamuri repasi
"Kune mimhanzi mudenga" (Hultsfred rwiyo)
Tinoona nyeredzi mune wese munhu. MuStefan mubhazi, muHanna pane yekuchengetedza imba basa uye kwete zvishoma mauri! Dudziro yeboka Infallet's mimhanzi inodudzira inoratidza sei
Ndiwo mimhanzi wakaisa Hultsfred pamepu uye hapana kumwe kunhu muHultsfred ndiyo mimhanzi yakadzika mukati memadziro seHotell Hulingen. Isu
Sweden Rock Dura
Zvinopfuura hafu yemiriyoni zvinhu zvine chekuita neSweden mimhanzi inozivikanwa Pano iwe unowana zvakarekodhwa, maposta, vhidhiyo rekodhi, mabhuku, zvido - uye Kurt Olsson yepakutanga koshitomu!
© Copyright - 2021 vangurc-store.se
Cookies uye yakafanana yekuchengetedza tekinoroji	Gamuchira
Isu ku visithultsfred.se tinoremekedza zvakavanzika zvako uye tinokoshesa hukama hwatinahwo newe. Isuwo tinonzwisisa kuti unogona kunge uine zvinetsekana nezve zvakavanzika zvako uye mashandisiro atinoita makuki. Kufanana nevamwe vazhinji, webhusaiti yedu inoshandisa tekinoroji kuunganidza ruzivo rwunotibatsira kuvandudza ruzivo rwako pamwe nezvigadzirwa nemasevhisi.